Wasiir Cukuse Oo Guddidii Qiimaynta Ku Dhaliishay Ku Eedeeyey Xubno WADDANI U Adeega Oo Mucaarid Ah | FooreNews
Home wararka Wasiir Cukuse Oo Guddidii Qiimaynta Ku Dhaliishay Ku Eedeeyey Xubno WADDANI U Adeega Oo Mucaarid Ah
Wasiir Cukuse Oo Guddidii Qiimaynta Ku Dhaliishay Ku Eedeeyey Xubno WADDANI U Adeega Oo Mucaarid Ah
“Kooxdaasi Waa Niman U Badan WADDANI, Mucaaridkuna Ma Jecla Wanaagga Xukuumadda”
Hargeysa (Foore)- Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Wacyigelinta Mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa gaashaanka ku dhuftay Warbixintii ay shalay soo saareen Guddida Dabagalka iyo Ilaalinta Hantida Qaranka ee Somaliland oo Wasaaradda Warfaafinta ku qiimeeyey Wasaaradda ugu liidata Wasaaradaha dalka ee aan lahayn hannaan hufan oo Miisaaniyaddeedu ku gaadho gobolada iyo sidoo kale in ay aad ugu hoosayso dhinaca maamul wanaagga, waxaanu Cabdilaahu Cukuse Warbixintaasi ku tilmaamay mid ujeeddo kale leh isaga oo duray Guddidan qiimaynta soo saartay oo uu ku sheegay kuwo u adeega xisbiga Mucaaridka ah ee WADDANI.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Somaliland Cabdillaahi Cukuse, oo warbixintaasi kadib saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inaanay qiimayntoodu ahayn mid lagu eegi karo maamul daadajin balse lagu eegi karo inay shaqadooda qabtaan. Wuxuu ku dooday inay shaqadooda si fiican u qabsadaan, isagoo u muuqda inuu meesha ka saarayo in wasaaraddu ka shaqayso gobollada. “Wasaaradda Warfaafinta, Wacyigalinta Iyo Dhaqanka xarunteedu waa Hargeysa. Qofka doonaya inuu qiimeeyaana waa inuu marka hore akhriyaa waajibaadka iyo xilka Wasaaradda Warfaafinta oo gartaa. Wasaaradda Warfaafinta waxa xilkeeda ugu muhiimsani yahay (Idaacadda, Tv-ga, Wargeyska iyo Websites-ka) inay muwaadin kasta oo reer Somaliland ah warka ku gaadhsiin karto maqal iyo muuqaal iyo akhris. Maaha annaga arrintayadu gobol ma aha degmo ee muwaadinka gurigiisa iyo halka uu fadhiyo waa inaanu ku gaadhsiinno hadduu gudaha jooga iyo hadduu dibadda joogaba, markaa anaga nalaguma qiimeeyo gobol iyo Degmo,” ayuu yidhi Wasiir Cukuse.
Wasiir Cabdilaahi Cukuse waxa uu sheegay in Guddida Dabagalka iyo Ilaalinta Qaranku u badan yihiin xildhibaano WADDANI ah oo aan qiimayn Karin xukuumadda. “WADDANI waa xisbi Mucaarid kolayba ma ammaanayo xukuumadda talada haysa. Mar baanu isku dayi doonaa in xisbiga KULMIYE-na qiimayn sameeyo. Mucaaridku kolayba ma jecla Wasaaradda Warfaafinta maadaama ay afka xukuumaddii ku hadlayso. Waayo waxa ay ka jawaabtaa wax kasta oo ay Mucaaridku dhibsan karaan. Wax kasta oo dacaayad ah oo mucaaridku fidsanayeen ayay wasaaraddu caddaysaa in aanay u jirn sida ay u buunbuuninayaan. Wasaaraddu wax kasta oo wanaag ah oo Mucaaridku qariyaan oo xukuumaddu leedahay ayay faafisaa sidaa darteed ma jecla. Halkan ugu jawaabi mayno ee waxaan diidayaa ku tiiqtiiqsiga” ayuu Yidhi Wasiir Cukuse.
Previous PostAkhriso Khudbaddii Guddoomiye Cirro Ka Jeediyay Munaasibadii Waddani Ku Soo Bandhigay Barnaamijkiisa Siyaasadeed Next PostWADDANI Oo Xaflad La Isku Arkay Ku Soo Bandhigay Barnaamij Siyaasadeedka Ay Dalka Ku Dhiqi Doonaan Haddii Ay Talada Ku Guulaystaan